I-Apple isungula i-betas yesine yabaphuhlisi be-iOS 15.1 kunye nezinye iinkqubo zokusebenza | IPhone iindaba
UToni Cortés | 13/10/2021 20:19 | iOS 15
Namhlanje yi usuku lwe-beta kwiCupertino. Kwimeko apho bekukho umphuhlisi we-Apple okruqulayo kwikona ethile yeplanethi, u-Apple usandula ukukhupha iinguqulelo ezintsha ze-beta zeenkqubo zazo zonke ezisebenzayo.
Yiyo ibetas yesine ye-iOS 15.1, i-iPadOS 15.1, i-tvOS 15.1, i-watchOS 8.1, kunye neMacOS Monterey. Oko kukuthi, phantse kuzo zonke izixhobo zenkampani. Kuphela zii-HomePods kunye nee-AirPods eziye zasindiswa. Nje ukuba bavavanywe, siza kubona ukuba banikezela ngazo naziphi na iindaba ezibalulekileyo, okanye zilungisa iimpazamo ezifunyenwe kwiibheta zesithathu.
Kwiyure nje edlulileyo, iApple ikhuphe iinguqulelo ezintsha ze-beta yazo zonke iinkqubo zayo yokusebenza yabo bonke abaphuhlisi bayo. Zibheta zesine, ke ngokomgaqo akufuneki zibonelele ngeendaba ezibalulekileyo, kwaye ngokulula ngokulula lungisa iimpazamo ifunyenwe kwiinguqulelo zangaphambili ze-beta.
Yeyona betas zesine ze IOS 15.1, i-iPadOS 15.1, i-tvOS 15.1, i-watchOS 8.1, kunye neMacOS Monterey. Inguqulelo yalo nyaka yesoftware yeMac kuphela kwayo engekakhutshwa kubo bonke abasebenzisi. Kulindeleke ukuba ngoMvulo ozayo abekhona kumsitho "Wokukhupha" le nkampani icwangcisileyo.
Njengesiqhelo, ezi betas zintsha ziyakhutshelwa nge-OTA Ukusuka kwimenyu "Useto" kwezi zixhobo ezineakhawunti yonjiniyela egunyazisiweyo esele ineebheta zangaphambili ezifakiweyo.
Kwaye siyakhumbula kwakhona ukuba ayicetyiswa ukuba ifake iinguqulelo ze-beta zesoftware eyahlukeneyo ye-Apple oyisebenzisa xa usebenza. Nangona zihlala zizinzile kwaye zithembekile, zinomngcipheko wokuzisebenzisa, kwaye nayiphi na impazamo enkulu inokubangela ukuba ulahlekelwe lulo lonke ulwazi olukwisixhobo, okanye okubi ngakumbi, ungayisebenzisi.
Kungenxa yoko le nto abaphuhlisi Bayifaka kwizixhobo esele benazo zisetyenziselwa oko, njengesixhobo esinye somsebenzi wabo. Yiba nomonde omncinci, kwaye ulinde ukufaka iinguqulelo ezisemthethweni zabo bonke abasebenzisi, ukuze ube nakho ukonwabela ngesiqinisekiso esipheleleyo seendaba ezibandakanya ezi betas.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » I-Apple isungula i-betas yesine yabaphuhlisi be-iOS 15.1 kunye nezinye iinkqubo zokusebenza
Iintlobo ezintathu ze-Apple Watch Series 8?